गण्डकी विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १९ असार २०७६)
बैंकको शेयरमूल्य १ वर्षको कारोबार अवधिमा अधिकतम रू. २२० पुगेको थियो भने न्यूनतम रू. १७७ पुगेको हो । बुधवार बैंकको शेयरमूल्य रू. २१४ कायम भएको छ । सो दिन बैंकको १० हजार ५४२ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । बैंकले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १४ दशमलव २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले रू. ३९ करोड ३ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा बैंकले रू. ३४ करोड ४ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा रू. ७९ लाख ३८ हजार खराब कर्जा उठाएकाले र खुद ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । बैंकको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ७५ करोड छ । रिजर्भ कोषमा रू. १ अर्बभन्दा बढी छुट्याएको छ । प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) रू. १८ दशमलव ९३ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३६ दशमलव ६६ छ । हाल बैंकले ७७ ओटा शाखा कार्यालयबाट बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।